Maxay Diinta Islaamku ka qabtaa in Xubin Doofaar lagu Beero Qof Bini’aadam ah? • Oodweynenews.com Oodweyne News
“Xirsi-yow ku talogal, adiga iyo kuwa kula midka ahba..dalkan waa laga qabanayaa” Af-hayenka KULMIYE
Ikraan Tahliil Hooyadeed “Ma dhici karto in Fahad Yaasiin uu Beledweyne yimaado,”
Booliska Gobolka Ohio Oo shaaciyay Muuqaal la xidhiidha Dilkii Sheekh Maxamed Xasan
Xildhibaanada Golaha Wakiilada JSL Oo ka Dooday Xeerka ka hortaga Tahriibta iyo ka ganacsiga dadka
Maxay Diinta Islaamku ka qabtaa in Xubin Doofaar lagu Beero Qof Bini’aadam ah?
News DeskJanuary 14, 2022
Sayniska afka qalaad lagu yiraahdo xenotransplantation – oo ah in xubin laga saaro noole laguna tallaalo noole kale – ayaa waxaa looga gol leeyahay xallinta gabaabsiga xubnaha lagu beero bani’aadamka, waxayna dhaqaatiirta iyo baarayaasha cilmigan ku takhasusay ay isku howlaan baadigoobka xayawaanno laga soo qaato xubno ku habboon jirka bani’aadamka.
Toddobaadkan dhexdiisa ayay ahayd markii warbaahinta caalamka ay qabsatay tijaabada wadne doofaar oo lagu beeray bukaan ay xaaladdiisu liidatay oo u dhashay dalka Mareykanka.
Ninkan qalliinka lagu sameeyay oo lagu magacaabo David Bennett oo 57 jir ah, ayay xaaladdiisu geeri qarka u saarneyd.
Dr. Maxamed Mansuur Muxyadiin, oo ah dhaqtar u dhashay dalka Pakistan oo ka mid ah labada dhaqtar ee qalliinkan sameeyay, qudhiisana ah Muslim – balse ku nool heystana dhalashada Mareykanka – ayaa sheegay in shaqadiisa uu diiradda ku saaray badbaadinta bukaannada u baahan xubnaha muhiimka ah sida wadnaha iyo kilyaha, sida uu kasoo xigtay taleefishinka Pakistan ee Geo TV.
Dhaqtarka oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ilaa 150,000 oo qof oo ku nool gudaha Mareykanka keliya ay sugayaan in xubno kale lagu tallaalo. Intooda badan bukaannadaas ayaa u dhimanaya xaaladdooda haddii aan loo helin xubin kale oo lagu beero, sababtoo ah ma jiraan xubno bini’aadam oo ku filan oo dhammaantood lagu wada talaalo, sida uu dhaqtarku sheegay.
Balse arrintan ayaa dood ka dhex dhalisay Muslimiinta adduunka, iyadoo diinta Islaamka ay xaaraantimeysay cunidda hilibka doofaarka.
Maxay diinta Islaamka ka qabtaa arrintan?
Qalliinka lagu sameeyay Baltimore, wuxuu qaatay in ka badan toddobo saacadood
Keliya diinta Islaamka ma mamnuucin cunidda doofaarka, ee sidoo kale Yahuudda ayaa xaaraantimeeyay doofaarka. Si kastaba culimada diinta Islaamka ayaa qaba inay jiraan xaalado gaar ah oo la eego.